Su'aalaha - Shanghai Langyi Qalabka Shaqada Co., Ltd.
Waa maxay antibacterial? Waa maxay habka waxqabadka ee wakiilka bakteeriyada?
Antibacterial waa erey guud, oo ay kujiraan jeermiska, nadiifinta, jeermiska, bakteeriyada bakteeriyada, caariyaatada, daxalka, iyo wixii la mid ah. Nidaamka loogu dilo bakteeriyada hababka kiimikada ama jirka ama carqaladaynaya koritaanka, taranka iyo waxqabadka bakteeriyada waxaa lagu magacaabaa jeermiska iyo bakteeriyada bakteeriyada.
Sannadihii 1960-meeyadii, dadku waxay inta badan isticmaaleen wakiilo ka hortagga bakteeriyada si ay u soo saaraan dhar ka-hortagga bakteeriyada. Horumarka guusha ee wakiilada bakteeriyada bakteeriyada aan caadiga ahayn ee 1984, dhammeystirka bakteeriyada ayaa si deg deg ah loo soo saaray, taasoo ka dhigeysa wakiilada lidka bakteeriyada in aan loo isticmaalin kaliya fiber iyo dharka, laakiin sidoo kale loo isticmaalo caagagga, qalabka dhismaha iyo alaabada kale.
Qarniga 21-aad, markii ay soo ifbaxday bulshada gabowday, tirada dadka waayeelka ah ee sariirta jiifa iyo kuwa nadaafadda guryaha ka shaqeeya ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay, iyo baahida loo qabo alaabada daryeelka waayeelka si looga hortago sariiraha jiifa ayaa sidoo kale kordhay.
Isbeddelka ka imanaya bulshada u janjeedha wax soo saarka una beddelaya mid nolosha u janjeedha, waxay noqon doontaa mawduuc muhiim ah mustaqbalka in la horumariyo oo la baaro alaabooyin waxtar u leh caafimaadka dadka iyo deegaanka dhulka.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira seddex habab oo ka hortag ah bakteeriyada ugu weyn ee antimicrobials: sii-deynta la xakameynayo, mabda'a dib-u-dhiska iyo caqabadda ama xannibaadda.
Codsiga hadda ee antimicrobials-ka ku habboon wuxuu ku saabsan yahay nabadgelyada iyo raaxada arjiga, iyo sidoo kale adkeysiga waxqabadka. Iyadoo kor loo qaadayo wacyiga dadka ee ilaalinta deegaanka, wakiilada antimicrobial ee dabiiciga ah ayaa soo jiitay feejignaan dheeri ah, sida chitosan iyo chitin, iwm. Si kastaba ha noqotee, wakiilada antimicrobial-yada dabiiciga ah waxay leeyihiin cilado muuqda oo ku saabsan iska caabinta kuleylka iyo adkeysiga jeermiska. In kasta oo antimicrobials antimicrobials si ballaaran loo isticmaalo, waxay leeyihiin cillado qaar ka mid ah caabbinta kuleylka, sii deynta amniga, caabbinta daroogada iyo wixii la mid ah. Wakiilka bakteeriyada noolaha waa nooc ka mid ah wakiilka bakteeriyada bakteeriyada loo isticmaalo suuqa intiisa badan, tikniyoolajiyaddu waa mid qaan gaar ah, waxayna leedahay faa iidooyin muuqda oo ku saabsan iska caabinta kuleylka, amniga, waxqabadka muddada dheer iyo dhinacyada kale, rajada dalabka suuqa oo aad u wanaagsan.
Qalabka Waxqabadka ee Shanghai Langyi Co., Ltd. wuxuu diiradda saarayaa bixinta xalka gaarka ah ee wax lagu daro ee qalabka polymer-ka ku saleysan, wuxuuna sii wadaa inuu siiyaa adeegyo kala-duwan nolol-wareegga oo dhan oo loogu talagalay macaamiisha silsiladda warshadaha polymer. Waxaan si madax banaan u soo saarnay AntibacMax®, Wakiilka antibacterial ee ion biraha aan caadiga ahayn, iyadoo laga jawaabayo isbeddelada suuqa iyo dalabaadka macaamiisha cusub. AntibacMax®wuxuu si joogto ah u sii deyn karaa lacagta, zinc, naxaasta iyo ion-yada kale ee bakteeriyada, wuxuuna leeyahay saameyn wanaagsan oo bakteeriyada ku saabsan fangaska bayoolojiga ah ee baahsan. U hoggaansamida nuxurka falsafada Shiinaha ee dhaqameed - "midnimada damiirka, aqoonta iyo dhaqanka", shirkaddu waxay siisaa wax soo saar, adeegyo iyo qiimeyn ku saabsan macaamiisha, shaqaalaha, saamileyda, bulshada iyo daneeyayaasha kale.
Intee in leeg ayaad ka ogtahay waxyaabaha ku saabsan antimicrobior-ka aan dabiici ahayn?
Sannadihii ugu dambeeyay, waxaa jiray isbeddello isa soo taraya oo ah dhacdooyin xun xun oo ay sababeen noolaha. Sida ku cad fahamkeenna, noocyo badan oo bakteeriya ah ayaa ku jira musqusha, sida E. coli, Staphylococcus aureus, staphylococcus white, bacillus subtilis, tetralococcus, iwm. Waxyaabo badan oo guriga ku yaal ayaa fudud inay soo baxaan bakteeriyada. Sidaa darteed, sida loo hagaajiyo dhibaatadan waxay ku tiirsan tahay wakiilka bakteeriyada.
Dabeecadda, waxaa jira walxo badan oo leh bakteeriyada wanaagsan ama ka-hortagga shaqada, sida qaar ka mid ah xeryahooda dabiiciga ah oo leh kooxo cayiman, qaar ka mid ah qalabka biraha aan dabiici ahayn iyo xeryahooda, macdanaha qaarkood iyo walxaha dabiiciga ah. Laakiin waqtigan xaadirka ah, maadada bakteeriyada ayaa si aad ah loola jeedaa maaddada awoodda u leh inay ka hortagto ama disho bakteeriyada iyada oo lagu darayo walxaha bakteeriyada qaarkood (oo loo yaqaan wakiilka bakteeriyada), sida balaastikada bakteeriyada, feyruska bakteeriyada iyo dharka, anti-bakteeriyada dhoobada, birta bakteeriyada. qalabka.
I. Mabaadiida bacteriostasis
A) Farsamaynta falcelinta xiriirka ion birta
Falcelinta xiriirku waxay keentaa burbur ama naafonimo xagga shaqada ah oo ka kooban qaybaha caadiga ah ee sheyga. Marka ion-ka qalinku gaaro xuubka microorganism-ka, waxaa soo jiita xoogga kolomb ee lacagta diidmada ah, kiishka lacagta ahna wuxuu galaa unuga, wuxuu la falgalaa kooxda -SH, isagoo ka dhigaya borotiinka inuu xinjiroobo oo uu baabi'iyo howlaha synthase.
B) Habka firfircoonida dhaqdhaqaaqa
Qaar ka mid ah walxaha biraha raadraaca ah ayaa oksijiin kara ama falcelin kara borotiinnada, asiidhyada dufanka aan buuxin iyo glycosides ee ku jira unugyada bakteeriyada, iyagoo baabi'inaya qaab-dhismeedkooda caadiga ah, sidaa awgeedna ka dhigaya inay dhintaan ama lumiyaan awooddooda kordhinta.
C) Habka hagaajinta xinjirowga
Bakteeriyada si xun loo soo dacweeyay ayaa soo jiitay tafaariiqda qalabka antibacterial-ka, kaas oo xaddidaya dhaq-dhaqaaqooda xorta ah isla markaana horjoogsanaya xirfadahooda neefsashada, sidaasna ku keenaya "geerida xiriirka".
D) Farsamaynta dhaawaca unugyada, enzymes, borotiinada iyo asiidhka nucleic
Antimicrobials waxay la falgashaa RNA iyo DNA si looga hortago jajabka iyo taranka.
Ujeeddada laga leeyahay isbeddelka suuqa iyo baahida macaamiisha cusub, Shanghai Langyis Functional Materials Co., Ltd. waxay si madax-bannaan u horumarisay AntibacMax®, ion bir aan dabiici ahayn oo ah wakiilka bakteeriyada. AntibacMax®wuxuu si joogto ah u sii deyn karaa lacagta, zinc, naxaasta iyo ion-yada kale ee bakteeriyada, wuxuuna saameyn wanaagsan ku leeyahay bakteeriyada fangaska bayoolojiga ku jira. Marka loo barbardhigo walxaha dabiiciga ah ee antimicrobial, AntibacMax® waxay leedahay iska caabin kuleyl oo ka wanaagsan, sii deynta muddada-dheer, xasiloonida kiimikada iyo amniga.
Waa maxay mastarista balaastigga ah ee ka hortagga bakteeriyada?
Masterbatch-ka caaga ah ee bakteeriyada bakteeriyada loo yaqaan waa shey cusub oo ka hortaga bakteeriyada oo soo saaray ayna soo saartay teknolojiyad gaar ah. Waxaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada wax soo saarka caagga ah, waxyeello uma laha jirka bini'aadamka waxayna saameyn ku leedahay bakteeriyada dhammaan noocyada bakteeriyada waxyeellada leh iyo caaryada.
Ka dib markii wax lagu duubo, waxyeellada cadaadiska, waxqabadka wax lagu duubo iyo wax soo saarka kale, mastarbaaska balaastigga ah ee ka hortagga bakteeriyada ayaa soo saaraya qalabka baakadaha cuntada, sahayda caafimaadka, qalabka guryaha, qalabka qurxinta gudaha ee baabuurta, agabyada gaarka ah ee loo yaqaan 'quartermaster', sahayda carruurta iyo maqaallada kale ee loogu talagalay isticmaalka maalinlaha iyo qalabka warshadaha ee leh howlaha ka hortagga bakteeriyada. .
Cusbi la adeegsan karo: PE, PP, PC, PET, PS, PU, ​​ABS, SAN, TPU, TPE (anti-bacterial, anti-ur, qoyaan, anion, microwave gaashaan, faafidda firidh infrared, fiber spinning), gantaallo gaar ah.
Masterbatch caag bakteeriyada ka hortaga ah
Astaamaha: sun kuma laha afka, ma laha cuncun maqaarka ah, ma laha sun ku jirta deegaanka; No hormoonnada deegaanka; Hubi in bakteeriyada lidka ku ah, saamaynta anti-caaryada; Iyada oo waxtarka sare iyo spectrum ballaaran ee anti-bakteeriyada, anti-caaryada, waxqabadka anti-algae; Saamaynta bakteeriyada ee sii socota; Iftiin wanaagsan iyo nabadgelyo kuleyl;
Codsiga: alaabada elektarooniga ah, baahiyaha maalinlaha ah, sahayda caafimaadka, qalabka carruurta, qalabka gawaarida, qalabka baakadaha cuntada, sahayda gaarka ah ee loo yaqaan 'quartermaster', iwm.
Qalabka Waxqabadka ee Shanghai Langyi Co., Ltd. wuxuu diiradda saarayaa bixinta xalka gaarka ah ee wax lagu daro ee qalabka polymer-ka ku saleysan, wuxuuna sii wadaa inuu siiyaa adeegyo kala-duwan nolol-wareegga oo dhan oo loogu talagalay macaamiisha silsiladda warshadaha polymer. Langyi wuxuu u tixgeliyaa "hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed" inay tahay aasaaska horumarka shirkadaha wuxuuna dhiirrigeliyaa hal-abuurnimo isku-dhafan oo kala-duwan. Waxaan maalgashi ka badan 10% ee wareegeenna R&D sannad kasta, oo aan dhisnaa koox cusub oo R&D ah oo leh awood farsamo oo xoog leh oo ay weheliso Jaamacadda Fudan, Jaamacadda Donghua iyo jaamacado kale. Waxaan ku guuleysanay cinwaano sharaf badan sida "Shanghai Advanced Private Enterprise", "Shanghai High-tech Enterprise", "Shanghai Specialized New small and medium-size Enterprise" and so on.
Wakiilka Polymeric Antihydrolysis, Masterbatch antibacterial, Maqaarka Antiwo Bakteeriyada Aan Laheyn, Yarn bakteeriyada, Bakteeriyada bakteeriyada dhalaalaysa-Blown Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch,